RW Rooble oo la shiray Beesha Caalamka | KEYDMEDIA ONLINE
Sii-hayaha xilka Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Rooble ‘Rogane’ ayaa kulan la qaatay wakiillada beesha caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kulanka oo ka dhacay Aaladda Zoom-ka ayaa looga hadlay xalinta khifaadka ragaadiyay doorashada ee ka dhaxeeya Dowladda Faderaalka iyo Maamullada xubnaha ka ah.
War ka soo baxay xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa lagu sheegay in RW Rooble uu Beesha caalamka kala hadlay sii wadista wada-hadallada DFS iyo Maamul Goboleedyada iyo dhaqan galinta heshiisyadii hore loo gaaray.
“Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble ayaa habka fogaan aragga shir kula yeeshay wakiillada beesha caalamka, kaas oo looga hadlay sii wadista wada xaajoodyada DFS iyo Dowlad-goboleedyada ee la xiriira hirgalinta heshiiskii 17-kii September 2020 iyo qodobbadii Guddigii farsamo ee Baydhabo”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xaafiiska Rooble.
Kulanka waxaa sidoo kale lagu bogaadiyay hab-dhaqankii Rooble ee dhawaanahaan uu ka billaabay magaalada Mugdisho, waxaana beesha Caalamku soo dhaweeyeen isfahamkii ka soo baxay shirkii Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Midowga Musharixiinta ee 25-kii Febraayo.
Keydmedia Online waxa ay fahansan tahay in sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha Roobel ‘Rogane’ ay Beesha Caalamku saareyso cadaadis xooggan oo ah inuu qaato doorkiisa, dalkana ka heirgalyo doorasho heshiis lagu yahay.